Jiangyin Iverson Decoration Material Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2005. Izy io dia orinasa feno manambatra ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny varotra.
Ny orinasanay dia manarona faritra 16000 metatra toradroa miaraka amin'ny atrikasa maoderina sy trano fanatobiana madio.
Ny vokatra lehibe dia: kitapo plastika vita amin'ny hazo (WPC), vato vita amin'ny plastika vato (SPC), gorodona vita amin'ny homogenous PVC ary ireo kojakoja mifandraika sns.
Ny gorodona PVC dia manana loko isan-karazany, toy ny voamaina vato, voamaina amin'ny gorodona, sns. Ny takelaka hazo tsirairay dia misy embossed, ary ny fanontana sy ny endriny dia mifanaraka mba hamoronana endrika hazo sy endrika tena izy. Mety amin'ny gorodona isan-karazany izy io ary ampiasaina amin'ny efitrano misy fifamoivoizana be, toy ny efitrano fandraisam-bahiny, lakozia, fandroana, efitrano fandriana, efitrano fandraisam-bahiny na fidirana sy lalantsara hisarihana masomaso. Azo apetraka amin'ny beton, tile, vinyl na hazo, a ...
Ny gorodona PVC dia karazan-java-haingo amin'ny gorodona vaovao be mpampiasa amin'ny firenena eran'izao tontolo izao ankehitriny. Tena malaza eo amin'ny tsena eropeana sy amerikanina ary ny tsena azia-pasifika izy io, ary malaza be koa izy any Chine, ary malalaka be ny vinan'ny fampandrosoana. Ny velaran'ny gorodon'ny PVC dia misy sosona mateza mahatohitra mangarahara teknolojia avo lenta, ary ny sosona super-mahatohitra misy fitsaboana manokana dia manome antoka tanteraka ny fanoherana tsara ny gorodona ...
SPC Floor dia vokatry ny haitao sy ny fahendrena. Izy io dia manolotra fifangaroan'ny sosona marobe, velarana fisaronana, fisalasalana avo lenta amin'ny fahadiovan'ny pvc mangarahara, sarimihetsika vita printy famaritana avo lenta, fototra SPC ary lamba moana. Ny SPC dia midika hoe 'vato vita amin'ny plastika vato' na 'fitambaran'ny polimer vato'. Ny marimarina kokoa, ny vatosokay, izay fitambarana tsy mitambatra. Mahatratra 50-70% ny atin'ny gorodona. Ny ambiny dia PVC sy stabilizer. Mazava ho azy fa ny ampahany dia nofaritan'ny mpitantana ny famokarana ozinina rehetra izay manao d ...
SPC Flooring henjana Core Interlocking Click Loc ...
SPC Flooring Rigid Core Interlocking Click Lock PVC Vinyl Flooring SPC dia midika plastika vato. Miaraka amin'ny fotony henjana, dia taranaka vaovao amin'ny rakotra gorodona, tontolo iainana kokoa, mateza ary mateza noho ny LVT. hidin-trano, izay azo apetraka mora foana amin'ny karazana gorodona toy ny beton na seramika na gorodona efa misy sns. Ireo zana-kazo vita amin'ny vinyl vita amin'ny rano vita amin'ny visy 100% ireo dia mampiasa teknolojia fototra hamandoana, izay ...